श्रीमानलाई मन नपर्ने श्रीमतीका ७ बानीहरु ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
श्रीमानलाई मन नपर्ने श्रीमतीका ७ बानीहरु !
सम्बन्ध निकै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब दुई फरक विचार भएका व्यक्तिहरुसँगै बस्न थाल्छन्, दुवैमा माया-प्रेम बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो । तर त्यसरीसँगै बस्दा दुवैलाई एक-अर्काको कतिपय बानीहरु मन पर्दैन । जसका कारण दाम्पत्य जीवनमा बहस, मनमुटाव र झगडा समेत हुने गर्छ । श्रीमान्श्री-मती दुवैलाई एक-अर्काको नराम्रो बानीका कारण सँगै बस्न, केही कुरा भन्न मन नलाग्ने हुन सक्छ । त्यसैले श्रीमान्श्री-मती दुवैले एक-अर्कालाई मन नपर्ने बानीमा सुधार गर्नु पर्छ । जसका कारण तपाईंको वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर बनिरहन सहयोग पुग्छ ।
आज हामी श्रीमतीका केही त्यस्ता बानीहरुको बारेमा बताउँदै छौं, जुन प्रायः श्रीमानहरुलाई मन पर्दैन ।
प्रायः श्रीमतीहरु आफ्नो श्रीमानको मुखबाट अन्य महिलाको प्रशंसा सुन्न चाहँदैनन् । श्रीमान् अन्य कुनै महिलाको प्रशंसा गरेमा श्रीमतीको मनमा इर्ष्या उत्पन्न हुन थाल्छ । मनमा शंकाको बढ्छ । आफ्नो श्रीमान् ती महिलाप्रति आकर्षि भएको त होइन, भनेर सोच्न थाल्छन् । केही महिलाहरु त भावुक भएर श्रीमानलाई व्यंग्य गर्दै ठुस्स परिदिन्छन् । कतिपय महिलाहरु त ‘तपाईंलाई मेरो कुनै कुरा मन पर्दैन’ भन्न पनि पछि पर्दैनन् । कतिले त ठट्टै ठट्टामा आफ्नो श्रीमानलाई ‘त्यही महिलाकहाँ जानू न’ समेत भनिदिन्छन् । श्रीमानलाई श्रीमतीको यस्तो बानी पटक्कै मन पर्दैन ।
यौन सम्बन्ध श्रीमान् तथा श्रीमतीको नैसर्गिक आवश्यकताको कुरा हो । तर श्रीमतीहरु कहिलेकाहीँ प्राकृतिक आवश्यकताको यो कुरालाई आफ्नो हतियार बनाउने गर्छन् । उनीहरु श्रीमानसँग कुनै कुरामा मनमुटाव भयो भने अथवा कुनै कुराको लागि दबाव दिनुपर्‍यो भने सबैभन्दा पहिलो काम श्रीमानलाई यौन सम्बन्धबाट वन्चित गर्छन् । एउटै ओछ्यानमा सुते पनि उनी श्रीमानको विपरित दिशातिर मुख फर्काएर सुत्छन् । श्रीमानलाई श्रीमतीको यो कुरा पनि मन पर्दैन ।
कतिपय श्रीमतीहरु कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट रुपले व्यक्त गर्दैनन् । उनीहरु सधैं घुमाइ(फिराइ गरेर कुनै कुराको संकेत दिने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो बेला जब श्रीमानले उनको कुरा बुझ्दैनन्, तब उनी उल्टै व्यंग्य गर्न थाल्छन् । त्यति गर्दा पनि श्रीमानले उनको कुरा बुझेनन् भने श्रीमतीहरु चिडचिडाउन थाल्छन् । त्यसैले श्रीमानहरु श्रीमतीले कुनै पनि कुरा स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरुन् भन्ने चाहन्छन् ।
अपनत्व तथा एकाधिकार जनाउनका लागि जब श्रीमतीहरु श्रीमान् अफिसबाट घर फर्किएपछि उनीहरुको अफिस ब्याग, पाइन्टको खल्ती, पर्स, मोबाइल, ल्यापटप जस्ता चिजहरुमा घोचपेच गर्न थाल्छन् अथवा ती चिजहरुको बारेमा चासो व्यक्ति गर्दै खोजीनीति गर्न थाल्छन्, यो कुराबाट श्रीमानहरु मनमनै निकै रिसाइसकेका हुन्छन् । धेरै चिन्ता त त्यो बेला महसुस हुन्छ, जब उनीहरुले आफ्ना श्रीमानसँग कुनै महिला, चाहे ती कुनै क्लाइन्ट नै किन नहुन्, उनको फोन, एसएमएस, फोटो अथवा कुनै कागजात देखेपछि त्यसका बारेमा विस्तृत रुपले जान्ने कोसिस गर्न थाल्छन् । पर्समा धेरै पैसा देखिन् भने त्यो पैसा कहाँबाट आएको, कसले दिएको जस्ता जिज्ञासा राख्न थाल्छन् ।
कतिपय श्रीमतीहरु एकपटक बोल्न थालेपछि लगातार बोलिरहन्छन् । उनीहरुमा त्यति धेरै कुराहरु कहाँबाट आउँछ, श्रीमानहरुले थाहै पाउँदैनन् । साथीको विवाह गएर फर्किएपछि, डाक्टरलाई जचाएर आएपछि, छिमेकीको घरमा नयाँ वासिङ मेसिन अथवा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण आयो भने अथवा विषय जे भए पनि उनीहरु त्यसको ननस्टप कमेन्ट्री नै गर्न थाल्छन् । एक(एक मिनेटको अपडेट बिस्तारपूर्वक बताउँछन् । जबकी उनीहरुकै श्रीमान ती कुराहरु छोटकरीमा सुन्न चाहन्छन् ।
केही श्रीमतीहरु रहेक समय श्रीमानलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरु लगाइरहन्छन् । मानौं, उनीहरुले आफ्नो श्रीमानको हरेक गतिविधि अथवा बानीमा आपत्ति छ । जस्तैः आज यो डे्रस किन लगाएको रु आज किन चाँडै अफिस जान लागेको रु आज किन ढिला घर आएको रु यति धेरै फोनहरु किन गरिरहेको रु २(२ वटा मोबाइल फोन किन राखेको रु आदि जिज्ञासाहरुको लिस्ट निकै लामो हुने गर्छ । यस्ता प्रश्नहरु सोधेकोसोधै गरेर श्रीमतीहरुले श्रीमानहरुलाई सताइरहेका हुन्छन् । यो बानी पनि श्रीमानहरुलाई खासै मन पर्दैन ।
सपिङ गर्नु श्रीमतीहरुको ठूलो कमजोरी हो । कैयौ पटक त उनीहरु टाइमपास अथवा मन बहलाउन समेत सपिङ गरिदिन्छन् । उनीहरुको सपिङ निकै बोरिङ हुन्छ । एक(एक चिजहरुलाई ध्यान दिएर हेर्नु र तिनीहरुको मूल्य सोध्नु, कपडाहरुलाई शरीरमै लगाएर हेर्नु, आवश्यकता नभए पनि धेरैभन्दा धेरै खाने कुराहरु किन्नु, डिस्काउन्टको लोभमा धेरैभन्दा धेरै सामानहरु किन्नु र प्रयोग नै नगरी फ्याँकिदिनु वास्तवमै इरिटेटिङ बानी हो । श्रीमानहरुलाई श्रीमतीहरुको यो बानी त झन् पटक्कै मनपर्दैन ।
जोडी नभएकाहरुलाई कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने खतरा धेरै
किन राखियो गाईको पुच्छर छेउमा दुई ओटा आँखा !
बिश्व प्रसिद्ध फ़ेशन डिजाइनर, ब्लगर, लेखक किर्जिदा रोड्रिग्जद्वारा निधन अगाडि लेखिएको नोटः
चार दिदीबहिनी, एकै दिन हुँदैछ विवाह पनि